Turkiga oo Ciidamo usoo direya Soomaaliya (Tirada iyo Sababta) – Xeernews24
Turkiga oo Ciidamo usoo direya Soomaaliya (Tirada iyo Sababta)
Dowlada Turkiga ayaa qorsheenaysa in Soomaaliya usoo diraan Ciidamo katirsan Milatariga dalkaasi iyo Saraakiil, kuwaa oo loogu tala galay in ay ka howlgalaan Xero ay ciidan oo dowlada Turkiga ka dhistay Deegaanka Jaziira.
Askartan iyo saraakiisha dowlada Turkiga usoo direyso Soomaaliya ayaa isugu jira tababarayaal iyo ciidamo si gaar ah u tababaran, waxa ayna tababar siin doonaan ciidanka kala duwan dowlada Soomaaliya.
Safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Bekar oo Wareysi siiyay Wargeys kasopo baxa dalka Turkiga ayaa sheegay in Ciidamo gaadhaya 300-askari oo Turki ah ay bisha Agoosto ee sanadkan imaanayaan magaalada Muqdisho.
Waxaa uu safiirka sheegay in bisha september si rasmi ah loo furi saldhiga milateriga ee ay ka hirgaliyeen duleedka magaalada Muqdisho, islamarkaana la bilaabi doono tababarada la siinayo ciidamadda Soomaalida ah.
Olgan Bekar ayaa xusay in dowlada Turkiga ay ka go’antahay in ay caawiso dowlada Feederaalka Soomaaliya si loo dhiso ciidan qaran loona soo celiiyo awoodii ciidanka iyo kala dambeyntii ka jirtay dalka Soomaaliya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/Türkisch-soldat.png 186 271 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-05-27 11:42:282017-05-27 11:42:28Turkiga oo Ciidamo usoo direya Soomaaliya (Tirada iyo Sababta)
XOG XASAASI AH: Imaaraatka oo loo fasaxay in Weeraro ka qaadi karaan Saldhiga... Dhalinta reer Salal oo Teegeero Lixaadle u Muujiyey Xisbiga Muusa Bixi